1 Feb – Maalinta Caalamiga ee Xijaabka. | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka December 5, 2017	0 343 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Maalinta Caalamiga Hijaabka waa dhacdo sanadle ah oo maskaxdeeda ay ka timid Nazma Khan sanadkii 2013-ka. Munaasabadda ayaa la qabtaa kowda bisha febraayo sanad kasta. Waxaana la xusaa 140 dal oo dunida kamid ah. Ujeedka maalintan waa dhiirri-gelinta haweenka kala diimaha iyo taariikhda leh inay xirtaan ama bartaan Xijaabka. Abaabulayaasha dhacdadan waxay ku qeexaan fursad dadka aan Muslimiinta ahayn lagula wadaagayo Xijaabka – si ay maalintaas u xirtaan.
Hayeeshe, waxaa jira dhaleeceymo iyo canbaareyn Maalintan lagala horyimid taas oo dad badan sida Asra Nomani ay ku tilmaantay dhaq-dhaqaaq casriga oo lagu baahinayo Aydhiyoolojiyad siyaasadeed oo Islaami ah oo abuuri karta si kale inay ula muuqato umadaha aan Muslimiinta ahayn.
Faham-darrida reer Galbeed badan ka heystaan Islaamka iyo baahinta muuqaallo aalaaba lala xiriiriyo argagaxiso iyo magac Islaam, noqosha Muslim ku dhex nool dunidan oo kale waa waaya’aragnimo xanuun badan. Islaam-naceybka ama Islamophobia wuxuu ku jiraa heerkii ugu sarreeyey. Haweenkuna waa dhibahana koobaad. Maadaama caadiyan inta badan laga fahmi karo muuqaalka kore, la yaab malahan inay maalinle ula kulmaan naceyb joogto ah.
Maclumaad kale oo intaan ka dheer, fadlan booqo mareegta: http://himilonetwork.com://worldhijabday.com/.
Previous: 02 Dec – Maalinta Caalamiga ee Cirib-tirka Addoonsiga